တခါတုနျးက သဈပငျတှဟော စကား ပွောတတျတယျ ဆိုပဲ ။ စကား ပွောတတျတဲ့ သဈပငျတှကေို ပနျးပုဆရာ တယောကျက ပနျးပုထုဖို့ ယူလာခဲ့တယျ ။
ခုတျထားတဲ့ သဈသားတုံး တှကေို ပနျးပု ထုတော့ သဈသားတုံး တတုံးက အထုခံရ ၊ အခုတျခံရ ၊ အထှငျးခံရ ၊ အရိုကျခံရ ၊ အနှကျခံရတော့ " နာတယျ " ဆိုပွီး အျောတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ပနျးပုဆရာဟာ အဲ့ သဈသားတုံးကို အသေးစိတျ မှနျးမံ မနတေော့ဘဲ တုံးမောငျး အဖွဈနဲ့ပဲ ထားခဲ့လိုကျ တော့တယျ ။
နောကျ သဈသားတုံး တတုံးကတြော့ ဘယျလောကျ နာပမေယျ့ သူ မအျောဘဲ ကွိတျမှိတျ သညျးခံပွီးတော့ နခေဲ့ လိုကျတယျ ။ ပနျးပုဆရာက အဲဒီ သဈတုံးကို ကတြော့ လူသားတှေ အပူဇျောခံမယျ့ နတျဘုရား ရုပျတု အဖွဈ ထုခဲ့ လိုကျတယျ ။
လူသားတှကေ တုံးမောငျးကို ခေါကျပွီး နတျဘုရားရုပျတုကို ပူဇျောတဲ့ အခါကတြော့ တုံးမောငျး ဖွဈနတေဲ့ သဈသားက အသညျး အသညျ ငိုကွှေးတယျ ။
သူတို့ဟာ အစ ပထမတုနျးက သဈပငျတှေ အတူတူ ဖွဈပါလကျြ နဲ့ ခုကမြှ သူကြ အခေါကျ ခံရပွီး ဟိုသဈသားတုံး ကတြော့ အပူဇျော ခံရတယျ ဆိုပွီး မကမြေနပျ ဖွဈသှားတယျ ။
ဒါနဲ့ ပနျးပုဆရာ ကို ဘကျလိုကျတယျ ဆိုပွီး စှပျစှဲ လိုကျတယျ ။ ဒီအခြိနျမှာ နတျဘုရားရုပျတု အဖွဈ ထုခံလိုကျရတဲ့ သဈသားက သူ့ကို ပွောတယျ ။
" မငျးကမှ သညျးမခံတာကိုး "
ဟုတျပါတယျ ။ လူသားတှလေညျး ကိုယျပိုငျ လမျးကွောငျးပျေါ ကိုတော့ သှားနခေဲ့ကွတာခငျြး တူပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အခြို့က အောငျမွငျ ကွတယျ ။ တခြို့က ဘာမှ မဖွဈထှနျးကွဘူး ။ တခြို့က ဖွဈတော့ ဖွဈထှနျးပါရဲ့ ၊ ဒါပမေယျ့ အကြိုးဖွဈထှနျးမှု အားနညျးကွရတယျ ။
ဒါဟာ ဘာကွောငျ့ ဖွဈရတာလဲလို့ ဆနျးစဈကွညျ့တော့ ခုနက ပွောတဲ့ လောကဓံရဲ့ ရိုကျပုတျမှုဒဏျကို အလူးအလဲ ခံရတဲ့ အခါမှာ သညျးခံနိုငျမှု ၊ သညျးမခံနိုငျမှု အပျေါမှာ မူတညျ ပွီးတော့ အကြိုးရလဒျတှလေညျး ကှာခွားသှား တာမြိုး ဖွဈပါတယျ ။
သဈသားခငျြး အတူတူ ဘယျလိုပုံစံမြိုး ဖွဈခငျြ ပါသလဲ ?
Kay Khaing Chan Myae
( လူငယျနဲ့ လူလညျ စာအုပျမှ )
တခါတုန်းက သစ်ပင်တွေဟာ စကား ပြောတတ်တယ် ဆိုပဲ ။ စကား ပြောတတ်တဲ့ သစ်ပင်တွေကို ပန်းပုဆရာ တယောက်က ပန်းပု ထုဖို့ ယူလာခဲ့တယ် ။
ခုတ်ထားတဲ့ သစ်သားတုံး တွေကို ပန်းပု ထုတော့ သစ်သားတုံး တတုံးက အထုခံရ ၊ အခုတ်ခံရ ၊ အထွင်းခံရ ၊ အရိုက်ခံရ ၊ အနှက်ခံရတော့ " နာတယ် " ဆိုပြီး အော်တယ် ။
ဒါကြောင့် ပန်းပုဆရာဟာ အဲ့ သစ်သားတုံးကို အသေးစိတ် မွန်းမံ မနေတော့ဘဲ တုံးမောင်း အဖြစ်နဲ့ပဲ ထားခဲ့လိုက် တော့တယ် ။
နောက် သစ်သားတုံး တတုံးကျတော့ ဘယ်လောက် နာပေမယ့် သူ မအော်ဘဲ ကြိတ်မှိတ် သည်းခံပြီးတော့ နေခဲ့ လိုက်တယ် ။ ပန်းပုဆရာက အဲဒီ သစ်တုံးကို ကျတော့ လူသားတွေ အပူဇော်ခံမယ့် နတ်ဘုရား ရုပ်တု အဖြစ် ထုခဲ့ လိုက်တယ် ။
လူသားတွေက တုံးမောင်းကို ခေါက်ပြီး နတ်ဘုရားရုပ်တုကို ပူဇော်တဲ့ အခါကျတော့ တုံးမောင်း ဖြစ်နေတဲ့ သစ်သားက အသည်း အသည် ငိုကြွေးတယ် ။
သူတို့ဟာ အစ ပထမတုန်းက သစ်ပင်တွေ အတူတူ ဖြစ်ပါလျက် နဲ့ ခုကျမှ သူကျ အခေါက် ခံရပြီး ဟိုသစ်သားတုံး ကျတော့ အပူဇော် ခံရတယ် ဆိုပြီး မကျေမနပ် ဖြစ်သွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ပန်းပုဆရာ ကို ဘက်လိုက်တယ် ဆိုပြီး စွပ်စွဲ လိုက်တယ် ။ ဒီအချိန်မှာ နတ်ဘုရားရုပ်တု အဖြစ် ထုခံလိုက်ရတဲ့ သစ်သားက သူ့ကို ပြောတယ် ။
" မင်းကမှ သည်းမခံတာကိုး "
ဟုတ်ပါတယ် ။ လူသားတွေလည်း ကိုယ်ပိုင် လမ်းကြောင်းပေါ် ကိုတော့ သွားနေခဲ့ကြတာချင်း တူပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အချို့က အောင်မြင် ကြတယ် ။ တချို့က ဘာမှ မဖြစ်ထွန်းကြဘူး ။ တချို့က ဖြစ်တော့ ဖြစ်ထွန်းပါရဲ့ ၊ ဒါပေမယ့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု အားနည်းကြရတယ် ။
ဒါဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲလို့ ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ ခုနက ပြောတဲ့ လောကဓံရဲ့ ရိုက်ပုတ်မှုဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံရတဲ့ အခါမှာ သည်းခံနိုင်မှု ၊ သည်းမခံနိုင်မှု အပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတော့ အကျိုးရလဒ်တွေလည်း ကွာခြားသွား တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။
သစ်သားချင်း အတူတူ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်ချင် ပါသလဲ ?
( လူငယ်နဲ့ လူလည် စာအုပ်မှ )